Gịnị kpatara WhatsApp anaghị arụ ọrụ? 9 ngwọta dị mma | Nzukọ Ekwentị
Gịnị kpatara WhatsApp anaghị arụ ọrụ? 9 ngwọta dị irè
Ọtụtụ ndị ọrụ bụ ndị ụjọ na-atụ mgbe WhatsApp anaghị arụ ọrụ, ebe ọ bụ na ọ bụrụla ihe eji eji eme ihe gburugburu ụwa iji nọgide na-enwe nkwukọrịta na ndị enyi, ezinụlọ yana ọbụlagodi ndị ahịa gị. Ọ bụ ezie na ọ naghị adịkarị, oge a na-akwụsị ọrụ ya kpamkpam.
Ihe mbụ ị ga-eburu n’obi mgbe WhatsApp anaghị arụ ọrụ bụ ịchọpụta ihe kpatara ya. Mgbe ụfọdụ, ihe kpatara ya nwere ike ọ gaghị abụ site na ikpo okwu n'onwe ya, kama ọ bụ nsogbu a na-eme na ọdụ anyị ma ọ bụ site n'aka onye ọrụ anyị. N'agbanyeghị ihe kpatara nsogbu ahụ, anyị ga-egosi gị n'okpuru Ngwọta 9 iji mee ka WhatsApp rụọ ọrụ ọzọ.
1 Servers nọ na ala
2 Hichapụ WhatsApp cache
3 Ike mechie ngwa
4 Hichapụ ma wụnye ngwa ahụ
5 Emelitere WhatsApp
6 Malitegharịa ekwentị anyị
7 Lelee data na ndabere
8 Are jikọọ na ịntanetị
9 Smartphone adịghịzi adaba na WhatsApp
Servers nọ na ala
WhatsApp na-eji sava gbasaa gburugburu ụwa na-arụ ọrụ. Ọ bụrụ na nke ọ bụla n'ime sava ndị a kwụsị ịrụ ọrụ, ngwa ahụ abụghịkwa, ebe ọ bụ na n'adịghị ka SMS ọ chọrọ njikọ na-adịgide adịgide na Internetntanetị. Iji chọpụta ma ọ bụrụ na sava ahụ na-arụ ọrụ, naanị azịza ya gaa na peeji nke Detector.
Down Detector bụ ikpo okwu nke na-anaghị agwa anyị banyere ọnọdụ nke sava WhatsApp, kama ọ na-agwa anyị banyere nọmba nke ihe omume emere na 24 gara aga. Ọ bụrụ na ọnụọgụ ihe mere dị oke elu, a ga-egosi ya na grafụ, yabụ ọ bụrụ na WhatsApp anaghị arụ ọrụ, anyị amatala ihe kpatara ya.
Ihe ngwọta maka nsogbu a adịghị. Naanị anyị ga-anọdụ ala ma chere maka nsogbu ndị sava ga-edozi. Iji zere ụdị nsogbu a, ebe anyị na-ebipụ kpamkpam n'oge oge nke ikpo okwu a anaghị arụ ọrụ, anyị ga-emerịrị wụnye ngwa ngwa ozi ọzọ dị ka telegram.
N'ụzọ nke a, mgbe WhatsApp dị ala, anyị nwere ike na-ajụkwa ase anyị na ndị enyi anyị site na nyiwe ndị ọzọ. O doro anya, ọ bụrụ na ndị enyi anyị etinyeghị ngwa ahụ, anyị agaghị enwe ike ịgwa ha okwu, yabụ gburugburu anyị niile ga-enwerịrị ngwa ahụ dị ka akụ nke abụọ.
Hichapụ WhatsApp cache
Ọ bụrụ na WhatsApp na-arụ ọrụ na-ezighi ezi, ya bụ, mgbe ụfọdụ ọ na-aga na mgbe ụfọdụ ọ naghị arụ, anyị nwere ike doro anya cache tupu ịmee usoro ọ bụla ọzọ dị ka iwepu ngwa iji chọpụta ma ọ bụrụ na nke a bụ ihe kpatara arụ ọrụ ahụ.
Ihichapụ cache, anyị ga-enweta njirimara nke ngwa ahụ (naanị dị na gam akporo) wee pịa bọtịnụ ahụ Kachapụ oghere.
Ike mechie ngwa
Mgbe anyị wụnye mmelite, oghere ahụ nwere ike ịme aghụghọ na ngwa ahụ, yabụ ọ bụ ihe amamihe ịdị na-ehichapụ ya oge niile, ebe ọ bụ isi iyi nke ngwa ịgba ụgwọ ngwa ngwa.
Ọ bụrụ na ngwa ahụ anaghị arụ ọrụ ma ọ bụ na-egosighi mgbanwe ọ kwesịrị, anyị ga-amanye imechi ngwa ahụ. Iji mee nke a, naanị anyị ga-eji mkpịsị aka gị mee ala site na ala nke ihuenyo ahụ, chọta ngwa WhatsApp site na iji site n'aka ekpe gaa n'aka nri na slide ya, ruo mgbe ọ ga-apụ n'anya.
Hichapụ ma wụnye ngwa ahụ
Mgbe ụfọdụ, mgbe anyị wụnye ngwa, ọ nwere ike igbochi ọrụ ndị ọzọ anyị tinyeburu, a nnọọ nkịtị nsogbu na niile sistemụ. N’okwu ndị a, ihe kachasị mma anyị nwere ike ime bụ ihichapụ ngwa ahụ ma degharịa ya.
Tupu ihichapụ ngwa ahụ ma tinyegharịa ya, ọ bụrụ na anyị achọghị ịhapụ data site na mkparịta ụka ikpeazụ, anyị ga-emerịrị mee nkwado ndabere nke chats anyị Site na ngwa ahụ, otu nnomi ndabere nke anyị ga-eweghachite ozugbo anyị weghachitere ngwa ahụ.
Mgbe ụfọdụ, ọ bụrụ na WhatsApp chọrọ ka ijikọ na ikpo okwu ozi, ngwa a na-emelite ka ohuru ohuru. Ihe a choro abughi ihe mbu, ma oburu na achoputawo nchebe, o karia ka anyi gha etinye ihe omuma ohuru di ugbu a, ebe obu na anyi agaghi enwe ike iji ngwa a.
Iji lelee na anyị nwere ụdị WhatsApp kachasị ọhụrụ na njedebe anyị, anyị ga-aga Play Store, ọ bụrụ na ọ bụ gam akporo ekwentị, ma ọ bụ Storelọ Ahịa, ọ bụrụ na ọ bụ iPhone na chọọ ngwa. Ọ bụrụ na, kama igosi bọtịnụ Open, emelitere mmelite ahụ, anyị amalarịrị ihe nsogbu WhatsApp nwere ike ịbụ.
Malitegharịa ekwentị anyị
Ọ bụrụ na anyị agabigawo WhatsApp Detector ma anyị ahụ na ọnụọgụ nke ihe metụtara ngwa ahụ dị ntakịrị, anyị ga-achọta azịza maka nsogbu a n'ụzọ ọzọ. Otu n’ime ha bụ Malitegharịa ekwentị anyị.
WhatsApp bụ ngwa arụnyere na sistemụ nrụọrụ (iOS / Android). Dị ka sistemụ ọ bụla, ọ dị mkpa imelite ya site n'oge ruo n'oge. ka anyi bidoghachi wepu ebe nchekwa nakwa na ọ na-arụ ọrụ ọzọ dịka ọ dị na mmalite.
Lelee data na ndabere
WhatsApp chọrọ njikọ intaneti na-adịgide adịgide iji rụọ ọrụ, ma ọ bụghị ga-akwusi ibu ngwa-ngwa ozigbo ozigbo ịghọ ngwa izipu ozi nke gosipụtara ozi anyị natara naanị mgbe anyị mepere ya.
Ọ bụrụ na anyị anataghị ọkwa, ọ bụghị naanị na ọ nwere ike bụrụ ihe na-egosi na ọrụ ahụ anaghị arụ ọrụ, mana ọ nwere ike ịbụ n'ihi na ngwa ahụ enweghị ike ojiji nke mobile data ma ọ bụ site na Wi-Fi mgbe niile. Iji lelee ya, anyị ga-enweta ngwa ma lelee ikikere kwekọrọ.
Are jikọọ na ịntanetị
Mgbe ụfọdụ ụlọ elu sel anaghị arụ ọrụ otu o kwesiri, ọ ga-ekwe omume na n'oge mgbanwe site na otu poolu gaa na nke ọzọ, ọnụ anyị na-aga n'ihu na-egosi na anyị nwere njikọ ịntanetị, mana nke ahụ abụghị eziokwu.
Iji lelee ya, anyị ga-emepe ihe nchọgharị ma gbalịa imepe ibe weebụ. Ọ bụrụ na nke a rụọ ọrụ, nsogbu nke njikọ ịntanetị abụghị ihe kpatara WhatsApp anaghị arụ ọrụ. Ọ bụrụ na ọ naghị akwụ ụgwọ ibe, ihe ngwọta ya bụ ịmalitegharịa ngwaọrụ ahụ nke mere na ọ na-ezighachi n'ụzọ ziri ezi na ụlọ elu sel dị nso ma weghachite njikọ ịntanetị.
Smartphone adịghịzi adaba na WhatsApp
Ọ bụghị ekwentị niile ejiri iOS na gam akporo dị ugbu a na ahịa dakọtara na WhatsApp. Mgbe nile, ụmụ okorobịa na WhatsApp na-emejuputa usoro nchebe ọhụrụ na arụmọrụ nke na-adịghị na nsụgharị ochie.
Na 2021, WhatsApp na-arụ ọrụ na ngwaọrụ ejiri:
Android 4.0.3 ma ọ bụ karịa.
iOS 9 ma ọ bụ mgbe e mesịrị nsụgharị.
KaiOS 2.5.1 ma ọ bụ nsụgharị dị elu.
Ọ bụrụ n ’ụdị nsụgharị ọ bụla adabaghị na WhatsApp jikwaa ọnụ gị, ngwa ahụ agaghị arụ ọrụ, yabụ ị ga - arụ ọrụ eme gị na ngwaọrụ iji gaa n'ihu na-eji nke a ozi n'elu ikpo okwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Nhazi ịkparịta ụka n'Ịntanet » Gịnị kpatara WhatsApp anaghị arụ ọrụ? 9 ngwọta dị irè
Ihe niile gbasara DMZ: ihe ọ bụ, ihe ọ bụ na gịnị bụ uru ya
Kedu ihe bụ Google Cassroom na kedu ka ọ si arụ ọrụ